Ubuntu's Ubiquity ichachinja kune inotevera vhezheni Ubuntu | Linux Vakapindwa muropa
Ubuntu's Ubiquity inozochinja kune inotevera Ubuntu kuburitswa
Pasina nguva refu yapfuura tanga tiine yedu nyowani vhezheni yeUbuntu, iyi inozivikanwa yeGnu / Linux kugovera, asi isu tatova nenhau nezve inotevera inotevera kusimudzira kwekugovera. Ubuntu Cosmic Cuttlefish ichaunza zvigadziridzo zvakati wandei pamusoro peshanduro dzayo dzapfuura, zvese zvine chinangwa chete chekugadzira Ubuntu hwakasimba, hwakachengeteka uye hwakavimbika Ubuntu 20.04. Ubuntu 20.04 ichave iri inotevera vhezheni yeUbuntu LTS.
Imwe yeshanduko ichave neUbuntu 18.10 ichave ichakanganisa iyo Ubuntu installer, inozivikanwa Ubiquity. Ino yekumisikidza inozoshandurwa zvachose. MuUbuntu 18.04 takaona masimudzirwo acho aisanganisira skrini nyowani iyo yaiwedzera iwo madiki ekuisa. Iyi sarudzo nyowani inotibvumidza isu kuisa yakaderera vhezheni yeUbuntu nemapurogiramu akakosha uye kutora nzvimbo shoma. Mark Shuttleworth aratidzira kuti kune inotevera vhezheni iyo inosimudza ichachinja zvachose, uchishandisa html, css, electron uye snaps tekinoroji kugadzira iyo nyowani vhezheni yeUbiquity. Izvi zvinoreva kuti iyo inosimudza ichave yakareruka uye nekuwedzera kuzere nekuda kwewebhu tekinoroji. Iwo mapakeji anoshandiswa anozoshandiswa kuisa maturusi akasiyana siyana Sezvo vari mapakeji asinganetsi mvura, kwete chete kuti anogona kushandiswa asi zvakare inodzivirira zvikanganiso panguva yekuiswa kweUbuntu. Ubuntu yatove kushandisa aya matekinoroji mumasaiti eMAS zvakabudirira, ndosaka vafunga kuunza kune yavo yekushandisa system.
Kwechinguva Hatina chero sampuro yacho asi hazvitore nguva kuti tione mhedzisiro mushanduro dzezuva nezuva kana zuva nezuva kuti vagadziri vari kuburitsa zuva rega rega. Shanduko iyi haizongokanganisa chete Ubuntu nemavhenekeri ayo epamutemo asiwo zvinokanganisa migove mizhinji seLinux Mint kana Elementary iyo inoshandisa Ubuntu sehwaro hwayo uye nekudaro ivo vanoshandisa Ubiquity seyakaisirwa chishandiso chavo. Saka, sekune vamwe vanoisa saCalamares, Ubiquity ichagamuchira shanduko uye kugadzirisa munguva pfupi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Ubuntu's Ubiquity inozochinja kune inotevera Ubuntu kuburitswa
Ubuntu 18.10 yatove mukusimudzira uye zita rekodhi ndiCosmic Cuttlefish